Skived Teflon Sheets - Skived Teflon Sheets PTFE - Skived Teflon Sheets Supplier - Skived Teflon Sheets Teflon - PTFE ပြား Teflon စာရွက်, PTFE လှံတံပေးသွင်း, PTFE ဘုတ်အဖွဲ့ Teflon ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, PTFE ချောင်းတွေ Teflon ဘား, PTFE တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, သတ္တုပါး
နေအိမ် > Teflon စာရွက် > Skived Teflon Sheets -
Skived Teflon Sheets,Skived Teflon Sheetsအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Cox ပလတ်စတစ် အပေါ် Jul 9th, 2015rating: 4.5Quality Skived Teflon Sheets supply by COX PlasticSkived Teflon SheetsBest Skived Teflon Sheets supply by China COX Plastic with best price.
Skived Teflon Sheets COX Plastic only offer Virgin PTFE products. ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့လျှင်နှစ်ချက်လျော်ကြေး.
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 7.5 – 15.5 / ကီလိုဂရမ်
Min.Order အရေအတွက်: 1 Piece/Pieces Based on negotation
supply နိုင်ခြင်း: 50 တစ်လလျှင်တန်ချိန် / တန်ချိန်
Skived Teflon Sheets Packing & ပို့ခြင်း
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: standard export case/carton or as customized
Delivery Detail: within7နေ့ရကျ
မူလအစရာ: Jiangsu, China (တိုက်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Cox မော်ဒယ်နံပါတ်: cox skived
ပစ္စည်း: PTFE, 100% Virgin PTFE အထူ: 0.03မီလီမီတာ-0.5မီလီမီတာ အရွယ်: 100MM~500MM, customized
Products Name: Skived Teflon Sheets အရောင်: purity white
2.High temperature PTFE စာရွက်s ကို
Item ရလဒ် ယူနစ်
ပစ္စည်း 100% Virgin PTFE
ဆန့်နိုင်အား 22-28 MPA
အထူ 1.5-120 မီလီမီတာ
Molded sheet 300~2000 မီလီမီတာ
PTFE skived sheet thickness 0.1-10 မီလီမီတာ
PTFE skived sheet width(Max) 2700 မီလီမီတာ
PTFE Sheet များ★ PTFE skived sheets★ skived PTFE sheets★ maith sulation★ PTFE skived sheet★ skived PTFE sheet★